အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ ~ Nge Naing
အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ
Sunday, November 14, 2010 Nge Naing 12 comments
“ငါတို့တသက်ယုံကြည်ချက်” နိူးဆော်လွှာ (မြ၀တီ ရဲခေါင်)
ပြည်သူလူထုသတိပြု ။ ။ တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံး (က) စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ခ) ယမ်းငွေ့ပြယ်ပြီး ကြေးစည်တီးသံ ဘဝဂ်ညံ သွားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဂ) သူပုန်မရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဃ) စစ်တပ်မလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (င) ပြည်တွင်းစစ်မရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (စ) တိုက်ပွဲမရှိတော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဆ) ပေါ်တာမဆွဲတော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဇ) ဆက်ကြေး ဂိတ်ကြေး မပေးရတော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဈ) စစ်တပ်က လာလာဖမ်းပြီး မိုင်းဗုးံမြှပ်ထားတဲ့ လယ်တွေမှာ အသေခံခိုင်းတဲ့ဘဝက လွတ်မြောက်သွားကြတော့မဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ည) စစ်တပ်က ခဏလိုက်ခဲ့ပါလို့ ခေါ်သွားတဲ့သူ မှန်သမျှ သပိတ်သွတ်လိုက်ကြရတဲ့ အဖြစ်မျိုး မရှိတော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဋ) သူပုန်နဲ့ စစ်သား သူငယ်ချင်းချင်း အမြင်မှား + ညီအစ်ကိုချင်း အထင်မှားပြီး မသတ်ရတော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (ဋ္ဌ) စွန့်စားရဲတဲ့ ကျောင်းသားအားလုံး တောမခိုရတော့တဲ့ ငြိမ်ချမ်းရေးကို အလိုရှိသူမှန်သမျှ မကြောက်တရား လက်ကိုင်ထားပြီး တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
(က) ရွှေအာမခံရှိတဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ခ) တန်ဖိုးမကျ မဖေါင်းပွတဲ့ ရွှေစက္ကူ (ဂ) ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အာမခံမဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ဃ) ဒီမိုကရေစီ တခေတ်လုံး စိတ်ချလက်ချ သုံးနိုင်ကြရမဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (င) တကမ္ဘာလုံးလှည့်ပြီး သုံးနိုင်မဲ့ ရွှေစက္ကူ (စ) မျက်နှာကြီး လိုသမျှပစ္စည်းကို ၀ယ်လို့ရမဲ့ ရွှေစက္ကူ။ (ဆ) ဘ၀င်မဆူ ရင်မပူတော့တဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ဇ) ရှစ် ၄ လုံး အရေးအခင်း ကာလနဲ့ လက်နက်မဲ့ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့သူများအတွက် အထောက်အထားခိုင်လုံသူ မှန်သမျှ ‘ကရုဏာကြေး’ ရကြမဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ဈ) စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေးကာလ စစ်မြေပြင် အသီးသီးမှာ ကျဆုံးသွားကြရတဲ့ ရဲဘော်များအတွက် အထောက်အထား ခိုင်လုံသူမှန်သမျှ ‘ကရုဏာကြေး’ ရကြမဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ည) စစ်အာဏာရှင် တပ်များရဲ့ ကိုယ်ချင်းမစာ ညာတာမှုမရှိ ဥပဒေမဲ့ မတရားနှိပ်စစ်ခြင်း ခံရတာကြောင့် ဒုက္ခိတဘ၀ ရောက်သွားကြရတဲ့ ပြည်သူများ၊ မုဒိမ်းကျင့် ခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးများနဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူများအတွက် အထောက်အထား ခိုင်လုံသူမှန်သမျှ ‘ကရုဏာကြေး’ ရကြမဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ဋ) တပ်မတော်ထဲက ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ ဗိုလ်၊ အကြပ်၊ တပ်သားမှန်သမျှ (နအဖ) ခေတ်ပျောက်၊ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်အရောက် ရွှေစက္ကူကို သုံးလိုကြလျှင် ဦးနှောက်ဥာဏ်သုံး အချိန်မဖြုန်းပဲ တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
(က) ရေ၊ မီး၊ မင်းဆိုး၊ သူခိုး၊ လာတ်စား၊ ဒီရန်သူမျိုးငါးပါးက လွတ်ကင်းပြီး ပြည်သူက ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ မင်းကောင်းမင်းမြတ်များ လက်ထက် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ပြန်ကျ အိမ်ရှင်မတိုင်း ၀မ်းသာ၊ ရဟန်းတော်တွေ ကြွလာတိုင်း ရွှင်ရွှင်ပြပြ ဆွမ်းလောင်းနိုင်တဲ့ ဘ၀ကို ပြန်ရောက်ချင်ရင်၊ (ခ) မဆလ လက်ထက်က လျှော်ကြေးမပေးပဲ ပြည်သူပိုင် အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကြီးတွေ မှန်သမျှ ပိုင်ရှင်တွေ ပြန်ရပြီး၊ (ဂ) နိုင်ငံခြားသွားလိုသူ မှန်သမျှ ရန်သူမိတ်ဆွေ မခွဲခြား (ပစ္စည်းမယူ၊ လူကိုမဖမ်း၊ တားဝရမ်းမထုတ် လာတ်မပေးရပဲ) လွတ်လပ်စွာ သွားနိုင်တဲ့ ခေတ်ကို တကယ် ရောက်စေလိုလျှင်၊ (ဃ) မဆလခေတ်မှာ ပြည်သူပိုင် အသိမ်းခံလိုက်ကြရတဲ့ တောင်သူလယ်သမား၊ ဦးကြီးများရဲ့ ဓါးမဦးချ လယ်ယာ ဥယာဉ်များနဲ့ မြို့ပေါ်က မြေပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ဂရန်မြေတွေကိုလည်း မူလပိုင်ရှင်တွေလက်ထဲ အချိန်မဆွဲပဲ ပြန်ရောက်ချင်ရင်၊ (င) လေးနှစ်တခါ တက်တက်လာနေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ အညီ (အလုပ်သမား၊ ရုံးအမှုထမ်းများနဲ့ လက်နက်ကိုင် စစ်သား၊ ရဲအမှုထမ်းများ အားလုံး) ရှားပါးစရိတ် ထပ်ထပ်တိုးပြီး၊ (စ) သြစတြေးလျား နိုင်ငံမှာလို လခစားမှန်သမျှ (ဘိုင်ကျတဲ့အချိန်၊ လ၀က်ကိုတကြိမ်) လစာလုပ်ခ ထုတ်ပေးတဲ့ခေတ်နဲ့ (ဆ) လမ်းဘေးဈေးသည် မြင်းလှည်း၊ ဆိုက်ကား အောက်ခြေလူတန်းစားများအတွက် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရများ လက်ထက် နေ့ပြန်တိုးစနစ်အရ အစိုးရဘဏ်များက ငွေထုတ်ချေးသွားတာကို မြင်ချင်ရင်၊ (ဇ) လင်လုပ်သူ စစ်ဘိုယ်ရဲ့အမှားကြောင့် (သားမယားနဲ့ ဘာမှမဆိုင်) လူဘုံအလယ်မှာ မျက်နှာမငယ်ပဲ ၀င်ထွက်သွားလာ ဘေးကင်းကွာပြီး လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်တွယ်တာတဲ့ အလုပ် ဘယ်တော့မှ မပြုတ်ပဲ ခပ်သွက်သွက် ကျောင်းသွား ဘေးရန်မများတဲ့ ဘ၀မှာ အကျမနာစေလိုလျှင် (ဈ) ဘိုယ်ရှုပ်ကြီး သန်းရွှေ နှုတ်မိန့်အရပဲဖြစ်ဖြစ် စာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခိုင်းစေချက်ကို မလွန်ဆန်ဝံ့လို့ (မတရားမှန်း၊ မမှန်မှန်း၊ မကောင်းမှန်း သိပါလျက်) မိမိနောင်ရေးအတွက် စစ်ထုံးစံအတိုင်း လုပ်မိသူမှန်မျှ သက်သေပြပြီး အဲဒီအပြစ်တွေက လွတ်ချင်ရင် တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
(က) မဆလခေတ်ကစပြီး ရဲအဖွဲ့ တခုလုံးကို ကျွန်သားပေါက်လို လုပ်ထားခြင်းမှ လွတ်မြောက်လိုကြလျင် (ခ) ဘိုယ်နေ၀င်းလက်ထက် သူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် သူတသက် သူစိတ်ကြိုက် လုပ်လာခဲ့တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို ပြည်နယ်သားများ အထင်မမှားအောင် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်လို့ အမည်ပြောင်းပြီး (ဂ) အဲဒီတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း လူမျိုးအလိုက် တပ်တွေကို မခွဲပဲ အကုန်ရောနှော ဖွဲ့စည်းသွားရမည့်အပြင် (ဃ) တပ်မတော်တခုလုံးရဲ့ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ စစ်ဦးစည်း နေရာများကိုလည်း လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) တပ်များမှာ စစ်ဝါအရင့်ဆုံး အရည်အချင်း အပြည့်ဆုံး၊ အပြစ်ကင်းဆုံး၊ အမြင်အကျယ်ဆုံး၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်အရှိဆုံး၊ လူမျိုးခွဲခြားမှု မရှိဆုံး ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်လေးစား တန်ဖိုးထားတဲ့ အထက်တန်းအရာရှိများကသာ အလှည့်ကျ တရားမျှတ သဘာဝကျကျ ရယူလုပ်ကိုင် သွားစေလိုလျှင် (င) ကမ္ဘာာကျော် ရွှေကြိဂံနယ်မြေကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်သွားပြီး (စ) ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်အတွင်းမှာလည်း (ပြည်ထောင်စု အစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထောက်အပံ့ခံ) ဘိန်းနှိမ်နှင်းရေး အထူးတပ်ဖွဲ့တခုကို သီးခြားလေ့ကျင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ (ဆ) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်ခြားလုံခြုံရေး၊ နယ်ခြားလမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး၊ နယ်ခြားမြို့သစ်များ တည်ထောင်ရေး၊ နယ်ခြားအမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲများ ဖွင့်လှစ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အစိုးရများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြလျက် (ဇ) ပြည်နယ်တိုင်းဟာလည်း လူမျိုးစုံ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ရဲ့ လက်အောက်ခံ ပြည်နယ်တပ်များ အညီအမျှထားရှိတာကို တွေ့မြင်လိုကြလျှင် မကြောက်မရွံ့ နောက်မတွန့်ပဲ တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
(က) လျှပ်စစ်မီးက ခဏခဏ ပျက်၊ အနေကြပ်၊ အစားကြပ်၊ အသွားအလာကြပ် ညဘက်မှာလည်း စာမဖတ်ရတော့တဲ့ ဘ၀က လွတ်မြောက်ချင်ရင် (ခ) ကျောင်းတွေကို ခဏခဏပိတ် ပညာရေးစရိတ် ပိုပို ကြီးလာပြီး ပညာရေးအဆင့်အတန်း နှိပ်ကျသွားတဲ့အတွက် ကမ္ဘာာ့အလယ်မှာ မျက်နှာငယ်နေရတဲ့ ဘ၀က လွတ်မြေက်ချင်ရင် (ဂ) လျှပ်စစ်မီးအား ပြတ်တောက်သွားလို့ သောက်ရေ၊ သုံးရေ မလုံလောက် အိမ်တွင်း စစ်မှု လုပ်ငန်းလေးတွေပါ ဆိုင်းဘုတ်ပျောက်သွားရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးက လွတ်မြောက်ချင်ရင် (ဃ) မီးသွေးက ဈေးကြီး မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းက ဈေးတက် အဲဒီကြားထဲ မိလ္လာရေကပါ ပြတ်ပြတ်လာလို့ အိမ်သာရှိပါလျက် ဖင်ဆေးရခက်တဲ့ ဘ၀က လွတ်မြောက်ချင်ရင်…တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
(က) အစာရေစာ ရှားပါးလာပြီး လေမုန်တိုင်းကျ ရေကြီး၊ မီးလောင် တက်တက်ပြောင်တဲ့ ဒုဗ္ဘိက္ခ န္တရကပ်၊ HIV နဲ့ AIDS ရောဂါတွေ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ရောဂန္တရကပ်၊ သားစဉ်မြေးဆက် တရက်မပြတ် တို့လူမျိုးချင်း ပြန်ပြန်သတ်နေရတဲ့ သတ္ထန္တရကပ် ဆိုတဲ့ ကပ်ကြီးသုံးပါးက လွတ်မြောက်သွားချင်ရင် (ခ) ဥပဒေပြု လွှတ်တော်က ရေးဆွဲပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေရယ်လို့ လုံးဝမရှိတဲ့ သူပုန်နယ်မြေနဲ့၊ ဥပဒေနဲ့ တရားရုံးများ ရဲဌာနများ အထင်အရှား ရှိပါလျက် စစ်တပ်ကို ကြောက်နေကြရတဲ့ ရဲအရာရှိနဲ့ ထမိန်ခြုံ တရားသူကြီးများကြောင့် စစ်တပ်က ကျူးလွန်ထားတဲ့ ပြစ်မှု မှန်သမျှ ဘယ်ကိုမှ တိုင်လို့လည်း အကြောင်းမထူး၊ တရားစွဲလို့လည်း မရတဲ့ ဘ၀က လွတ်မြောက်ချင်ရင်၊ (ဂ) ဘုရားကအောက် မျောက်က အထက်ဆိုသလို အစိုးရက စစ်တပ်အောက် အစိုးရအထက် စစ်တပ်ရောက် သူတို့ရဲ့ အမိန့်က အဓိက၊ တရားဥပဒေက သာမည ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ (စစ်တပ်ရော သူပုန်ပါ) လက်နက်ရှိသူတွေသာ ဗိုလ်ကျလာတဲ့ ခေတ်ကို ချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိုလျှင် (ဃ) ရှေ့အဖို့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရများ အာဏာရတဲ့အချိန်တိုင်း (ဖဆပလ) ခေတ်က ရောင်စုံသူပုန် ထကြတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ (ပထစ) သန့်ရှင်းအစိုးရလက်ထက်မှာ စစ်တပ်က အာဏာလုတာ ခံလိုက်ကြရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွား မီးသေသွားတာကို မြင်လိုလျင်- တွေးမနေနဲ့၊ ငေးမနေနဲ့၊ ဆွေးမနေနဲ့၊ ပြေးမနေနဲ့၊ တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြ။
စည်းမကျွံ၊ နယ်မကျွံ ဘောင်မလွန်ပဲ ရဲရဲ လုပ်ပါ၊ တို့ဘက်က မမှားစေနဲ့ သတိထား၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြို့တမြို့က လူအားလုံးကို သိမ်းကျုံးဖမ်းချူပ် (နို့စည်ဗူးထဲက နှမ်းတွေလို) ဆံ့အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ထောင်မျိုး တထောင်မှ မရှိ။ ထို့အတူ နောက်လိုက် ရဲဘော်များမပါပဲ စစ်ဗိုလ်တွေချည်း မြို့တမြို့ကို သိမ်းနိုင်တာ ဒီကမ္ဘာဘယ်မှာမှ မရှိ မယုံရင် စမ်းကြည့်။
လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် ပထမဆင့်
NLD ဟာ စစ်အုပ်စု ခင်းတဲ့လမ်းကို မလျှောက်ပဲ ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ရပ်တည်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဘ ဦးရဲခေါင် တိုက်တွန်းသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို ပြည်သူလူထုဝန်းရံဖို့ တကယ်ကို လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး ပို့စ်အသစ် ရေးဖို့လည်း ကျွန်မမှာ အချိန်မရ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် (၁၄-၁၀-၀၉ က) တင်ထားတဲ့ အဘဦးရဲခေါင်ရဲ့ပို့စ်ကို လက်တွေ့နဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ အသစ်ပြန်တင်ထားပါတယ်။ မူရင်းပို့စ်က အရင်တင်ခဲ့တဲ့ နေ့စွဲနဲ့ ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။
မြ၀တီ ရဲခေါင်ရဲ့ ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င်အကျဉ်း ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted in: မျှဝေခြင်း,မြ၀တီ ရဲခေါင်,ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်,နိုးဆော်လွှာ
November 14, 2010 at 8:58 PM Reply
That guy "Myawaddi Ye Gaung" is
a weak head like the junta chief
he is opposing.
Inflation is everywhere, there is
no currency backed with gold, US$
and Sterling Pounds are not backed
with bullion. Inflation is normal
as long as it is less than 3% and
it is not an issue. No one can pay
money for some dickheads who fought
wars and died from either side.
Ethnic insurgency will be there as
they are fighting for their races
but some of them are as corrupted
and .... as some rogue soldiers and officers from our side, Burmese army. That chap isadick
head, get education!!!
November 14, 2010 at 9:22 PM Reply
Anonymous - သူပြောတဲ့ ငွေစက္ကူနေရာမှာ ရွှေစက္ကူလို့ ပြောထားတာက တင်စားပြီး ရေးထားတာသာ ဖြစ်တယ်။ အရင်ပို့စ်တခုရဲ့ မှတ်ချက်အောက်က ကျွန်မပြန်ကူးလာတာကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ "ကျွန်မလည်း ငွေစက္ကူမဟုတ်ပဲ ရွှေစက္ကူ ဖြစ်နေတာကို မေးပါတယ်။ သူပြန်ရှင်းပြတာက အခုခေတ် ပိုက်ဆံက ဘာမှအာမခံမထားပဲ စက္ကူရွက်တွေကို စက်က ထုတ်ချင်သလို ထုတ်နေလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ စက္ကူရွှက်တွေ ဖြစ်ပေမယ့် ၆၂ စစ်တပ် အာဏာမသိမ်းခင်က မြန်မာငွေကတော့ ထုတ်တဲ့ ပိုက်ဆံတန်ဖိုးနဲ့ ညီတဲ့ ရွှေပေါင်တင်ပြီးမှ ပိုက်ဆံကို စက်က ရိုက်ထုတ်ရလို့ ဒီမိုကရေစီခေတ်က မြန်မာပိုက်ဆံဟာ သိပ်ပြီးတန်ဖိုးကြီးလို့ ရွှေစက္ကူတွေ ဖြစ်တယ် ငွေစက္ကူ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။"
November 14, 2010 at 10:50 PM Reply
Yes that isawrong concept that Burmese perceived asagood idea.
A state is giving away sovereign rights when its ability to print
currency is limited by the bank
of another state or another third
party entity. It is theatool foranation state,atool and it is part ofastate's monetary policy.
Neither US dollar today, nor UK pound is backed by bullion (gold bars) as they did. US also printed
her currency like any other governments do and Burmese government will do in future.
That was true that Kyat was backed
by bullions but that was stopped
and it wasaright approach since
the self imposed ability to limit
currency control is handing over ofastate's sovereign rights.
Exchange rates and covertiblity are different matters.
that it is not good to spread wrong concepts.
November 15, 2010 at 3:29 AM Reply
ဒီပို့စ်မှာ ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော့် ကွန်မန့်အပါအ၀င် ကွန်မန့်တွေ ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။
အခု ဒီပို့စ်က အသစ်တစ်ခုလို ပြန်ထွက်လာတယ်။
World War II နောက် ပိုင်း မှာ ရွေ ပေါင်ခံ တဲ့စနစ် ဖျက်လိုက်ပြီ ဆို ....sinpleview blog ထဲမှာ အဲဒီအကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့့်ပြန့်ဆွေး နွေ ထား တာ ရှိတယ် ...
November 15, 2010 at 7:16 AM Reply
ပို့စ်အဟောင်းကို အပေါ်ဆွဲတင်ထားတာ သက်သက်ဆို Link ထားတဲ့သူတွေရဲ့ Link မှာ သွားမပေါ်ဘူး။ ဘလော့ကို လာလည်တဲ့သူတွေထဲက သတိထားမိတဲ့သူတွေပဲ မတော်တဆတွေ့ပြီး ဖတ်ဖြစ်ကြတယ်။ ပို့စ်အသစ်တင်ထားမှ တကူးတက လာဖတ်ကြတော့ အသစ်ပြန်တင်ထားပါတယ်။ အရင်ပို့စ်ကို http://nge-naing.blogspot.com/2009/10/blog-post_14.html ကိုကျတော့ သူ့ကို တင်ခဲ့တဲ့ ရက်စွဲရှိရာ နေရာကို ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ ပို့စ်ရဲ့ အောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ မူလတင်တဲ့ပို့စ်နေရာကို ရေးထားပေးပါတယ်။ မှတ်ချက်က အဲဒီထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အကြောင်းပြန်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။
ကိုသူရ - အဘဦးရဲခေါင် ပြောသလို ၆၂ မတိုင်ခင်က မြန်မာပိုက်ဆံဟာ ရွှေပေါင်တင်ထားမထား ကျွန်မ အဲဒီလောက်တော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၆၂ မတိုင်ခင်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ တဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၆ ကျပ်က ဘယ်မှာပဲလဲလဲ ရတယ်။ အခုလို တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာက ၆ ကျပ်ခွဲ၊ တကယ်လဲရတာက တထောင်ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်မနေဘူး။ အဲဒီ တထောင် ပတ်ဝန်းကျင်တောင် တခြားနေရာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ သွားလဲလို့မရဘူး။ ရွှေ့ပေါင် တင်သည်ဖြစ်စေ၊ မတင်ထားသည် ဖြစ်စေ အဲဒီတုန်းက ပိုက်ဆံ ရွှေလိုတန်ဖိုးရှိဆိုတာ တင်စားတယ်အဖြစ်ပဲ ကျွန်မ နားလည်တယ်။
November 15, 2010 at 12:16 PM Reply
re: Anonymous of comment no.1
While I'm not sure whether you are dickhead or shithead I'm sure that you've some knowledge about economy, ofcourseabit there andabit here.
However, keep in your mind that the chap who wrote this article isamaster in literature which is not your profession, I believed.
He's about the same age with your grandfather and hasalot of experiences that you're lack of.
He's not givingalecture about economic here but just sharing and giving some advices to younger generation like you, and your ignorance isaremarkable one.
Therefore, needless to say that you're the one that needed to get some education about social manners or otherwise your parents may get some poo over their heads soon, ofcourse accidentally by you.
November 15, 2010 at 8:23 PM Reply
It's suchashame to be bitten byastreet dog. I'm done with that half-baked bigot.
February 27, 2011 at 2:43 AM Reply
အဘ ဦးရဲခေါင် ရဲ့ပို့စ်ထဲမှာ "(၂) (က) ရွှေအာမခံရှိတဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ (ခ) တန်ဖိုးမကျ မဖေါင်းပွတဲ့ ရွှေစက္ကူ (ဂ) ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အာမခံမဲ့ ရွှေစက္ကူ .........." ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်...
အဲဒီ "ရွှေအာမခံအကြောင်း" ကို ပိုသိချင်တဲ့ ဗဟုသုတအဖြစ် လေ့လာချင်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များ Simple Views ဘလော့မှာ ကိုပြည်သူ တို့ ဆွေးနွေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်...
Simple Views ဘလော့မှာ 22 September 2010 ရက်က တင်တဲ့ "ပြည်သူ့ သဘောထား" post
(( http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/2010/09/blog-post_22.html#comments ))
အောက် က comments တွေမှာ ကိုပြည်သူ တို့ ဆွေးနွေးထားတာပါ...
ပြည်သူ ( 23 September 2010 18:56 )
ပြည်သူ ( 23 September 2010 20:08 )
ပြည်သူ ( 24 September 2010 07:50 )
ပြည်သူ ( 24 September 2010 08:15 )
ပြည်သူ ( 24 September 2010 08:53 )
ပြည်သူ ( 24 September 2010 10:00 )
ပြည်သူ ( 24 September 2010 10:19 )
nyi-htet ( 24 September 2010 17:50 )
စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များ ကျနော့် comment အပေါ်က "ရွှေအာမခံအကြောင်း" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
August 6, 2014 at 5:10 AM Reply
August 26, 2015 at 1:05 AM Reply